NetBase: sehatra ara-tsosialy ara-tsosialy orinasa. Martech Zone
NetBase, Accelovation teo aloha, dia sehatry ny asa aman-draharaha sosialy ahafahan'ny mpikaroka tsena mandrefy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny media sosialy.
Ny Net Base Monitoring Platform dia manome hery ireo mpivarotra amin'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy ary fitaovana fandrefesana izay manome fahitana eo noho eo sy eo amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra mitarika ny hevitry ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany. Ny NetBase Insight Workbench dia manome mpikaroka tsena miaraka aminy Analytics, tabilao ary fitaovana fikarohana.
Ity misy ohatra iray an'ny Netbase's BrandPassion Index, ampiasaina hamaritana ny fifaninanana famakafakana marika (miaraka amin'ny ohatra tsara amin'ny fiantsenana fialantsasatra amin'ireo mpivarotra lehibe):
CustomerBase, ny fitaovana farany aorina izay iasan'ny Sehatra ara-tsosialy ara-tsosialy, mandady ny harato, manisy index ny 12 volana lasa teo amin'ny hetsika an-tserasera, ary manamafy ny fihetseham-po sy ny hevitra ary ny fomba fijery misy lohahevitra, manome fomba fijery azo ampiasaina.
Ny mampiavaka azy amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany dia ny fanodinana ny teny voajanahary. CustomerBase dia mampiditra fijanonana-teny toy ny satria, by, ho an'ny or rehefa izay tsy raharahain'i Google sy ireo motera fikarohana nentim-paharazana. Ny fampidirana toy izany dia mamela ny famaritana ny sahan-kevitra ary koa ny tena fahatsapana, mamela ny fomba fijery tsara kokoa. Tranga iray: Google dia nanisy marika handoro miaraka amin'ny fifandraisana ratsy, fa ny CustomerBase kosa no handinika handoro amin'ny hazavana tsara raha ampiasaina amin'ny famafana vava ny andianteny.
Ny USP lehibe faharoa dia ny habetsaky ny angona. Ny hetsika 12 volana dia mitovy amin'ny bytes roa hetsy lavitrisa amin'ny antontan-taratasy dizitaly fito miliara mahery. Nanambara ny orinasa fa hanisy fehezanteny 50,000 isa-minitra avy amin'ny loharano toy ny Facebook, bilaogy, forum, forum Twitter ary Twitter ary ho an'ny mpanjifa.
Ireo mpivarotra dia mety mampiasa ny NetBase ho fitaovana fikarohana eny an-tsena, hanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy, na hitrandrahana ny valiny amin'ny fampiasam-bola sosialy. Avy amin'ny tranokalan'izy ireo:
Manaova fanitsiana mazava ho azy haingana kokoa mampitombo ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra sy ny vola miditra. Rehefa milaza aminao avy hatrany ny feo sosialy hoe aiza no mahomby ny fampielezan-kevitrao sy ny antony mahatonga azy ireo mitolona, ​​azonao atao ny manatsara ny fiverenan'ny vola lany amin'ny marketing.
Ampitomboy ny fanentanana mamantatra ireo manan-danja influencers sy fanantenana. Fantatrao fa misy "VIP ara-tsosialy" any - olona izay re ny feony rehefa milaza amin'ny mpanaraka an'arivony ny marikao sy ny mpifaninana aminao ianao. Fantaro tsara hoe iza izy ireo ary omeo antony maro hirotsahana. Hamantatra bebe kokoa.
Ataovy mahomby ny fandefasana vokatra vaovao amin'ny manara-maso mavitrika ny fandraisan'ny mpanjifa amin'ny vokatra vaovao rehefa miditra amin'ny tsena izy ary amin'ny alàlan'ny fandefasana valiny haingana sy mirindra amin'ireo olana sy fitarainana mety hitranga. Vakio bebe kokoa momba ny vahaolana vaovao momba ny fanombohana ny vokatra.
Araho matetika ny fahasalamanao. Makà fanapahan-kevitra tsara kokoa momba ny marika ary manafaingana ny valin'ny fandrahonana amin'ny marika miaraka amin'ny KPI feno handrefesana sy hitantanana ny fahasalamana ara-tsosialy ara-potoana. Vakio bebe kokoa momba ny vahaolana famakafakana marika anay. Raha te hahalala fa mihatra amin'ny olana ara-barotra eto an-tany ny fahasalamana ara-tsosialy, vakio ny fandalinana ny Starbucks ao amin'ny bilaoginay.
Maminany ny hetsika ataon'ny mpifaninana ary mamaly haingana kokoa fandrahonana amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fandinihana haingana sy haingana amin'ny marika mifaninana. Mianara bebe kokoa ary jereo ny Index Passion-ntsika mihetsika amin'ny bilaogy NetBase.
Fantaro ny valiny ara-tsosialy lalina amin'ny fampielezan-kevitra, mba handraisana fanapahan-kevitra tsara. Zahao ny bilaoginay raha te hahalala bebe kokoa momba ny fampiasan'ny Wall Street Journal ny NetBase ho an'ny tatitra momba ny fanaraha-maso ny fihetseham-po isan-kerinandro.
Ataovy bebe kokoa amin'ny teti-bola sy ny enti-manana efa misy anao. Ny vahaolana NetBase dia manara-dalàna ary mandrafitra ny fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy ho sokajy sy refy ilaina. Raha tokony handamina fanehoan-kevitra an'arivony amin'ny tanana ianao dia afaka miasa amin'ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra.
Aza hadino ny misambotra ny namantsika, Jason Falls, izay manao Webinarina Smart Smarts ho an'ny Netbase amin'ny 15 Aogositra 2012: Ny fomba KISS amin'ny fahombiazan'ny varotra nomerika.
Tags: faharanitan-tsaina ara-tsosialy orinasasehatra fitsikilovana sosialy orinasanetbasefanaraha-maso ny fotoana tena izyfitantanana lazafanadihadiana ara-tsosialyfaharanitan-tsaina ara-tsosialyfandrefesana ara-tsosialyfifandraisan'ny media sosialy
ireo mpankafy sosialy anao
Jul 23, 2012 amin'ny 1: 22 AM
Rehefa mividy Mpankafy Facebook ianao dia hitombo ny isan'ny mpitsidika ny pejinao araka ny tokony ho izy ny tranokalanao, ahafahanao mampiasa bebe kokoa ny tambajotra sosialy ho an'ny besinimaro mba hampitomboana ny fidiram-bola. Mihamaro ny olona amin'izao fotoana izao mampiasa tranonkala tambajotra sosialy ho an'ny fividianana mba hifandraisana amin'ny namany sy ny fianakaviany. Miaraka amin'ny isan'ny mpanjifa tsy mampino manokatra ny tamba-jotra isan'andro ianao dia manana fahafahana tsy manam-petra hanolotra ny orinasanao, ny serivisy ary ny entanao amin'ireo ho mpanjifa manerana izao tontolo izao. Mividiana mpankafy facebook amin'ny mpankafy anao